प्रदेश दुईले अझै किन टुङ्ग्याउन सकेन नाम र राजधानी ? – bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > प्रदेश दुईले अझै किन टुङ्ग्याउन सकेन नाम र राजधानी ?
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाडौं । प्रदेश २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष हुनै लागे पनि प्रदेशको नाम र राजधानी अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १२:०९ bampijhyala 0
संक्रमण, १८ दिनमा कति संक्रमित कति निको भए
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौंं । नयाँ भेरियन्टको कोरोनाभाइस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण नेपालमा...
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९
सम्झनामा जेठ ३ २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:५९